नेईमार र एम्बाप्पे बिनाको पिएसजीले रियल मड्रिडलाई चखायो नमिठो हार ! - Maxon Khabar
Home / Sports / नेईमार र एम्बाप्पे बिनाको पिएसजीले रियल मड्रिडलाई चखायो नमिठो हार !
नेईमार र एम्बाप्पे बिनाको पिएसजीले रियल मड्रिडलाई चखायो नमिठो हार !
हिजोबाट सुरू भएको खृल अन्तर्गत युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सर्वाधिक १३औं पटकको च्याम्पियन रियल मड्रिडले यो सिजनको पहिलो खेलमै नमिठो हार बेहोरेको छ । समूह चरणको पहिलो खेल खेल्न पेरिस पुगेको रियललाई फ्रेन्च क्लब पिएसजीले ३–० ले स्तब्ध बनायो ।
नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान भएको पहिलो लेगको खेलमा पिएसजीलाई घरेलु मैदानमा जिताउनेक्रममा अर्जेन्टिनी विंगर एन्जल डि मारयाले पिएसजीका लागि पहिलो हाफमा दुई सुन्दर गोल गरेर पाहुना टोलीविरुद्ध २–० को अग्रता दिलाएका थिए । स्मरण रहोस्, डि मारिया रियल मड्रिडकै पूर्वखेलाडी हुन् ।
पिएसजीका लागि डि मारियाले खेलको १४औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए । त्यसपछि खेलको ३३औं मिनेटमा उनले निकै दर्शनीय प्रहारमा बललाई जाली चुमाएपछि पिएसजीले पहिलो हाफमा २–० को सहज अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि दोस्रो हाफमा पनि पिएसजीले १ गोल थप्यो ।
इन्जुरी समयमा सब्सिच्युट खेलाडी थोमस म्युनिरले गोल गरेपछि खेल पिएसजीले ३–० ले जित्यो । यो जितसँगै पिएसजी समूह ‘ए’मा ३ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । पराजित रियल सबैभन्दा पुछारमा छ । ह्याजार्ड बेल र बेन्जामा जस्ता खतरनाक हतिहार उतारे पनि रियलले खेल अबधी भरि १ शट पनि टार्गेटमा पार्न सकेन ।